Dubai Jobs for Indians ayaa riyaaqaya sida loo helo shaqo? 🥇
Ku dhaji CV bilaash ah!
Dib u Bilaab Bilow!
Dubai Shaqooyinka loogu talogalay dadka Hindiya
Dubai oo loogu talogalay dadka ajnabiga ah ee Dubai
Waxaa laga yaabaa 16, 2018
Naukrigulf goobta shaqo ee Bariga Dhexe ugu fiican
[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 soo deg = 'Nala soo xiriir!' nooca = 'duulitaan' booska = 'bidix' dherer = 'auto' ballac = '800' xagal = '90' bgcolor = '# ff5100' txtcolor = '# ffffff']
Shaqooyinka Dubai ee Hindidas qurbajooga
Bogga shaqada ee magaalada Dubai iyo UAE
Shaqooyinka Dubai ee dadka reer Indiya u dhoofaya. Sida xaqiiqda ah, our qorista qorista waxaa inta badan loo abuuray kor u qaadista shaqo doonka Caalamiga ah. Guud ahaan Hindiya, Pakistan iyo Shaqaalaha Koonfurta Afrika. Adeegyada cajiibka ah ee shirkaddayadu bixiso caalami ah shaqo doonka. Sannadihii ugu danbeeyay waxay naga caawinayaan in aan dhisno awood sare dhammaanba suuqa kala iibsiga ee Dubai.
Marka la fiiriyo dhowr shaqooyin oo Dubai ah oo loogu talagalay Hindida qurbaha iyo goobaha raadinta ee GCC. Shirkadda Dubai City waxay bilaabaysaa caawinta dadka shaqo doonka ah si ay shaqo uga helaan Bariga Dhexe. U barbar dhig dadka kale annaga ayaa ugu horreeya Shirkadda UAE Bariga Dhexe. Guud ahaan kuwa ku hadla Shaqaaleynta WhatsApp adeegyada in Wadamada GCC.
Iyadoo ujeedkani yahay si loo caawiyo duulimaadyada ka socda UAE. Kooxdayadu waxay ka caawisay dhowr shirkadood oo magaalada Dubai ah inay qortaan dadka. Guud ahaan, shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay soo-guurayaasha Hindida. Ujeedadayadu waa si looga caawiyo dadka shaqo doonka ah ee ka soo jeeda India sidii ay ku heli lahaayeen shaqooyinka banaan. Bartamaha ee Suuqa suuqa shaqada ee dadka ajnebiga ah. The Shirkadda Duqa Magaalada Dubai oo si fiican u shaqaynaysa suuqyada shaqada ee suuqa.
Si aad u muujiso Ruuxa of Dubai. Shirkaddayadu waxay caawineysaa dadka kale shirkadaha waaweyn ee shaqaalaysiinta. Sababta oo ah si loo xoojiyo shaqo doonka caalamiga ah. Waxaan kala talinaynaa shaqo yar oo shaqo doon ah bartayada. Kooxdayada oo bixisa talo muhiim ah oo muhiim ah oo ku saabsan socdaalka. Gaar ahaan kuwa ay Dubai Jobs for Indians. Marka loo eego xaaladahaas shaqo ee Dubai iyo Abu Dhabi. Noqo mid aad ugu sahlan ugaadha shaqo doonka ah.
Adeegga ugu fiican ee raadinta shaqo raadinta
Caddaynta ugu badan ee aan dhiibno waa la meeleeyaa, murashaxiinta iyo qurbaha cusub. Nidaamkeenu waa mid gaar ah loogu talagalay soo-galootiga shaqo doonka ah ee Bariga Dhexe. Kooxda qorista ee Magaalada Dubai oo si dhaw ula shaqeysa loo shaqeeyayaasha, shaqaaleysiinta, iyo wakaaladaha shaqada. Iyada oo la raacayo, Waxaan kuu soo bandhigi doonaa shaqooyinka Dubai ee dadka Hindida ah.
Bartilmaameedkayagu waa inaan ku siinno fursad aan kula soo xiriirto shaqaalaynta maamulayaasha. Si toos ah ula xiriir ilaa intaad la socon doonto shaqooyinkayaga ku yaal Dubai blog Tilmaanta ah u dhaqaaqista UAE. Waxaan nahay shirkadda ugu dhaqsaha badan kobaca warbaahinta bulshada. Awoodayaga suuq geynta ayaa naga caawineysa inaan gaarno dhowr milyan oo taageerayaal ah oo adduunka oo dhan ah.
Suuqa shaqaaleynta ee Bariga Dhexe ayaa sida caadiga ah u dhaqaaqaya. Mid ka mid ah tusaalooyinka loogu talagalay waa Expo 2020. The Dawladda ku-meel-gaadhka ah ee Dubai waxay shaqaaleysiisay Airports. Shaqooyinka Dubai u leedahay Hindida waa qaybta ugu weyn. Laakiin dhinaca togan, waxaad ka heli kartaa qoraalo badan oo laxiriira. Guud ahaan marka laga hadlayo, dhammaantood waa inay kaa caawiyaan sidii aad shaqo ugu heli lahayd Bariga Dhexe.
Raadi Shaqooyinka Dubai ee Hindida qurbo joogta shirkadaheena.
Sidee loo gaarsiiyaa Dubai Jobs for Indians ee dalxiisayaasha?
Badanaa shaqo doonka cusub ee Imaaraadka Carabta. Waxay isweydiinayaan su’aal hMaadaama aad shaqo ku leedahay Dubai booqasho fiiso ah?. Tan iyo markii ay imanayeen UAE. Keliya booqashada fiisaha oo aan shaqo raadsado. Inaad si buuxda daacadnimo kula jirto. Shaqo raadin inta aad booqaneyso Dubai. Maaha sida ugu fiican. Sababtoo ah inaad shaqo ka hesho UAE waxay qaadataa waqti.
Dhinaca dhinaca wanaagsan, shirkadeenu wali way ku caawin karaan. Ha ka welwelin shaqooyinka Dubai ee India iyo Pakistan ama Koonfur Afrika. Waxaa la heli karaa intaad raacdo waxbarashadayada. Waxaa jira dhowr qalab waxaad isticmaali kartaa si aad shaqo uga hesho Dubai. Xiriirka WhatsApp Group ee Dubai. Dhab ahaantii waa mid ka mid ah. Sida ugu fiican si loo gaaro loo shaqeeyayaasha GCC dalka waa in lala hadlo.
Super wanaagsan shaqo ka raadinta Dubai. Waxaan kula talineynaa kuwa dheereeya inay u dhigaan qaab kale oo ay ugaadhsadaan. Wali waa mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee lagu meeleeyo Dubai iyo Abu Dhabi. Waa in la tago iyo dib u soo noqoshada wareysiga socodka. Mid ka mid ah siyaabaha ugu da'da weyn. Laakiin wali way shaqeeyaa ilaa hadda shaqo raadinta ee UAE.
Inaad Shaqo u Qaadato Dubai sida Tusaha Cadaaladda?
Shaqooyinka Dubai ee Hindida iyo Pakistani
Ujeedada loogu talagalay Caawinta shaqaalaynta ee shaqo doonka caalamiga ah. Shirkadda Magaalada Dubai waxay u dhaqaaqday dhanka WhatsApp Kooxaha Shaqooyinka iyo shaqooyinka dhajinta maalin kasta. Ka badan 520,000 shaqo doonayaasha ka yimid Pakistan waxaad imanaysaa Dubai City. Iyagoo rajeynaya inay shaqo fiican ka helaan Emirates. Sababta ugu weyn Sababta dadku u dooranayaan UAE waa arrin sahlan. Gobolka GCC ayaa koraya bil kasta. Isla mar ahaantaana, fursadaha raadinta shaqooyinka way ka badan yihiin marka loo eego gobollada kale.
Inkastoo dibad baxa raadinta shaqooyinka faa'iidada leh. Ugu dhakhsaha badan habka loogu talagalay Xirfad waa hudheel. Ku dhowaad isla goobta ayaa shaqaalaha beddelaya qaab nololeedka Imaaraadka Carabta. Shaqaale muddo-dheer xaqiiqdii caawinta raadinta meheradda saxda ah.
Si aad u tilmaanto una aragto adeegyadayada booqasho Shaqooyinka Dubai ee Indias Gacanka ka badan shirkaddayada blog. Waxaad ka heli kartaa dhowr maqaalo. Iyadoo tixgelin la siinayo dadka shaqo doonka ah ee reer Pakistan iyo qurbaha India. Sababtoo ah maahan in qof walbaa noqdo a xubin kamid ah toddobada imaaraad ama shirkaddeenna sida duulimaad ah.
Sida ugufiican ayaa ah in si fudud lagu bilaabo adeegyadayada. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo ayaa nalooga saarayaa annaga ku habboon barnaamijka mihnadda beddelashada on WhatsApp. Kooxdayada maaraynta ayaa kuu heli kara macluumaadka shaqaalaynta adiga. Soo qaado caawimaad dheeri ah adiga shaqo raadinta ee UAE. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah. Gaar ahaan adeegyadeena waad heli kartaa shaqo in Dubai sida dalxiis. In kasta oo aan kor u qaadno resumeygaaga warbaahinta bulshada.
Shirkad dhameystiran oo kugu hagaya u guurista Dubai
Waxaa jira dhowr Tilmaamaha u-guurista Imaaraatka. Laakiin dhab ahaantii, badankood waxay ku siiyaan macluumaad cayiman oo keliya. Maqaallada dhaadheer ee ku saabsan Waa immisa kharashka ku noolaanshaha Dubai?. Meesha laga codsado shaqo UAE. Sidee loo Helaa Shaqooyinka Dubai ee Hindida ?. In kasta oo ay tani noqon karto hagida saxda ah ee shaqo doonka cusub ayaa la sameeyay loogu talagalay kuwa aan waligood soo booqan UAE.
Blogger qaar ka mid ah oo raadinaya inuu helo gaadiid badan. Ama nuqul qorayaasha oo aadan ka heli doonin qiima badan. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo waxaad booqataa kooxaha WhatsApp-ka ee shaqooyinka banaan tusaha Dubai. Waxaa loogu talagalay ujeedada warbaahinta bulshada. Helitaanka shaqo marka ugu horeysa waligeed ma sahlaneyn.
Shirkadda Dubai City wuxuu qorey dhowr qoraalo ku saabsan shaqada. Shirkaddeenna shaqaalaynta kuma eka oo keliya shaqooyinka Dubai ee Hindida. Maqaalladayada iyo adeegyada shirkadda xaqiiqdi waa ay caawinayaan ugaarsadeyaasha mihnada. Gaar ahaan waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqo raadinta bangiga UAE. Lagu lammaaneeyey Tilmaam faahfaahsan oo loogu talagalay shaqooyinka MBA ee Dubai. Iyo waxyaabo kale oo badan oo macluumaad ah oo aad u baahan doontid mustaqbalka dhow si aad shaqo u hesho.
Adeegyada shirkadeena, waxaad awoodi kartaa raadso macluumaad loogu talagalay dadka ajnebiga ah ee ku saabsan qorista xarfaha. Tusaale ahaan maqaalka shaqo raadinta ee Filibiin. Halka aan ku maareeyey macluumaad dhammaystiran oo loogu talagalay qurbe-joogga Filibiin ee ku saabsan shaqo ka raadinta UAE. Sidee loo maareeyaa shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay qurbaha Hindida? Hoos ka daawo muuqaalka Wixii macluumaad dheeraad ah.
Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay Hindiya
Ka Fiiri Fursadaha Imaatinka
Shaqooyinka Dubai iyo xirfad-shaqo oo ku tartamaya UAE
Booqashada UAE oo ah dalxiis iyo ka dibna mustaqbalka u soconaya. Si tartiib ah u ogaan kartida suuq-geynta oo loogu talogalay shaqooyinka Dubai sida tartan. Oo Sidee la yaab leh Bariga Dhexe iyo Dubai oo leh fiiso?. Kadibna waad ogtahay inay tani tahay inay noqoto dalkaagii hooyo. Xaqiiq ahaan, shirkaddayada maamusha a dhuumaha adag ee isku xirnaanta.
Guud ahaan adigoo adeegsanaya adeegyadayada waxaad la xiriiri kartaa madaxda sare. Waxaa intaa dheer dhab ahaantii u dhexeeya 2018 iyo 2019 sannadkii, waad awoodi kartaa u diraan hay'adaha shaqaalaynta ee Sharjah. Waad sameyn kartaa taas si aan toos aheyn adoo adeegsanaya shaqooyinka kale ee xariirka. Taasi waxaan kugula talineynaa adiga. Ama sida xaqiiqda ah, waad baran kartaa sida kor loogu qaado CV-gaaga Bariga Dhexe.
Intaa waxaa dheer, waxaan nahay shirkaddii ugu horeysay ee GCC. Taasi caawinta shaqo doonka ah si ay uhesho xiriirinta madaxda sare. Dhinaca kale, waad soo jeedin kartaa wanaagsan Qoraha ee UAE. Ka ogoow boggayaga sida weyn HR Directors ayaa qoraya Dubai. Waa maxay meesha ugu fiican? inaad u guurto Dubai ama Abu Dhabi?. Oo soo ogow hWaxaan kaa caawin karnaa inaad ku gaarto milkiilayaasha ganacsiga ee Sacuudi Carabiya iyo wadamada kale ee Gacanka ee Bariga Dhexe.
Sida loo helo loo shaqeeyayaasha UAE?
Dabcanna loo shaqeeyayaasha guud ee bulshada. Xaqiiqdi, waad ku dhufan doontaa, shirkadaha ugu sareeya ee UAE xirfad ku leh maamulka maareynta Pakistan. Ugu danbeyntii noocyada Shaqooyinka ee Dubai dadka Hindida, haddii ay xiiseynayaan. Marka la eego qodobbadaas, waad iska bedeli kartaa xirfaddaada caalamiga ah si dhakhso leh.
Asal ahaan, natiijada ka dhalaneysa adeegsiga our adeegyada kooxda ee GCC. Waxaad ka heli kartaa aqoonyahanadan ganacsi magaalada. Dhinaca taban, badiyaa loo shaqeeyayaasha shaqaalaha u muuqda kaliya ayaa booqda fiisaha. Dhanka togan, Dubai waxaa ku yaal dhowr bilaw. Iyo badankood shaqaaleyaal shaqaale caalami ah.
Imaatinka Imaaraadka Carabta, waad awoodi kartaa dooro shirkadaha ammaanka. Ilaa shirkado caalami ah oo leh jagooyin fuliyaal sare oo mushahar ahaan aad u mushahar badan. Halkaasna cadowga kaliya ee adiga ayaa kuu noqon doona wakhti. Tusaale inaad hesho warqad shaqo oo ka socda loo shaqeeyaha Imaaraadka. Xaqiiqdii waxaad u baahan doontaa buugga ugu yaraan lix bilood. Waana inaad ubaahantahay xoogaa lacag ah oo bilow ah.
Resume Resume for Dubai Jobs for Indians
Xaalad kasta ha noqotee, Resume Resume ilaa shaqo ka raadso Dubai laga bilaabo Hindiya. Ama si fudud ugu soo biir qoraal resume ah Kooxahayaga UAE WhatsApp. Haddii aad cilmi baadhe u tahay Shaqooyinka caalamiga ah shaqooyinka banaan. Shaqada Dubai ee Hindida waa mid ka mid ah heshiisyada ugu kulul.
Kooxda Dubai City waxay sidoo kale jeclaan lahayd inay kuu soo diraan email casuumad. Si aad u muujisid adeeg raadinta shaqada oo ay la socdaan wax barista. Dhinaca kale, fadlan fiiri oo hel cusub shaqo ee Qatar ama Dubai. Dhinaca wanaagsan, dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa cusbooneysiineysaa profile aad la leedahay shirkaddayada. Kadibna qorayaasha cusub ayaa bilaabi doona inay kugu soo booqdaan ku biir shabakada xirfadaha moobiilka. Oo annaguna waannu haysannaa Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawin karno inaad shaqo hesho.
Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay dadka ajnabiga ah ayaa laga yaabaa inay adkaato hawlaha lagu maareeyo. Iyadoo maskaxda lagu hayo, Shirkadda Dubai City isku xirka iyo la shaqeynta hay'adaha kale ee qorista. Hadafkayagu waa inaan kaa caawino inaad shaqo ka hesho Emirates. Waa inaad sidoo kale fiirisaa adeegyadayada kale ee ay kooxdayadu bixiso. Sababtoo ah marka la eego Dubai Shaqooyinka loogu talagalay Hindisaha qurbajooga. Waxaan nahay shirkad wayn suuqa shaqada ee caalamiga ah loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Aasiya.
Dadka u shaqeynaya Dubai iyo Abu Dhabi
Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay dadka Hindida ah ee shaqo doonka ah
Sidaa darteed haddii aad u baahan tahay mid ka mid ah adduunka ugu Dubai oo xiiso leh mustaqbalkiisa iyo shaqooyinka shaqada. Waa inaad tixgelisaa Aagga Magaalada Dubai. Si aad taas u sameyso waxaad u baahan tahay inaad haysato qorista iyo adeegga suuq-geynta shakhsi ahaaneed ee shaqada. Gaar ahaan degaanka xarunta magaalada Dubai. Kooxdayadu waxay ogyihiin sida loo maareeyo Dubai Jobs for Indians.
Khaladka guud ee shaqo doonka cusub. Xaqiiqdii maahan inaad ku shubto resumeygaaga Abu Dhabi. Ujeedadayada, waxaad ka heli kartaa shaqo Abu Dhabi iyo Dubai City. Adigoo isticmaalaya adeegyadayada shaqaaleynta shirkadeenna. Wixii hubaal ah uma baahnid inaad wakhti ku qaadato raadinta boqolaal maqaalo oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya xirfadlayda. Kooxdayadu waxay had iyo jeer isku dayayaan inay bixiyaan cadaadis Macluumaadka loogu talagalay dadka shaqo doonka ah iyo bogagga internetka ee gudaha UAE.
Shirkadda Dubai City waa shirkadda keliya ee halkaas waad ku wanaajin kartaa aragtidaada ku xirnaanshaha araggaaga qiimayaasha 5X. Marka lagu daro adeegyadeena, waxaad weydiisan kartaa qof inuu ku biiro shabakadaada xirfadeed. Ujeedada martiqaad ah in ay ku xidhmaan oo booqdaan Dubai. Kahor intaadan ogaan waxaas oo dhan suurto gal ee Imaaraadka Carabta Adiga iyo shaqada aad arki karto.
Shaqooyinka Dubai City ee Bariga Dhexe
Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay Hindisaha iyo bannaanbaxyada ugu dambeeyay
Shirkadda Dubai City waxay muujineysaa qaab gaaban. Soo-booqdayaasha cusub ee shaqaaleysiinaysa iyo shaqooyinka raadinta sida ay ku aadaan Dubai iyo shaqo raadinta. Ujeedadayadu guud ahaan waxaan ka hadlaynaa waa inaanu tusno dhaqanka shirkadeed wakhti go'an. Tusaalooyinka mid ka mid ah waa Google dhaqanka shirkadaha ganacsiga. Gunaanad faahfaahsan, waxaan isku dayeynaa inaan bixinno macluumaad qiimo leh iyo caawinta raadinta shaqada. Gaar ahaan fursadaha shaqooyinka ee dadka Hindida ah.
Intaa waxaa dheer, ka caawinta dadka ajnabiga ah ee ka socda UAE talooyin la xiriira shaqooyinka. Shirkaddeenu waxay isku dayeysaa inay hagto booqdayaasha maxalliga ah ee Imaaraatka carabta ee ku jira shaqaalaysiinta Shirkadaha Dubai. Oo waxay siisaa dib u eegis amar. Sida ay tahay inaad wax u qabato inta hawsha waraysiga socoto. Iyo sida ay wakaaladaha shaqada uga shaqeeyaan Dubai. Baadhitaan shaqaalaha cusub ee suuqa Suuqa Asia ee Asia.
Dubai City Shirkadu waxay ka shaqeysaa Bariga Dhexe. Abuuri hareeraha 50,000 shaqaale cusub oo dib u bilaabo. Ka dibna u soo dir shirkadaha kale ee lamaanahan ee Dubai iyo Abu Dhabi. Taa beddelkeeda, adeeggan ayaa si xaqiiqo ah u caawinaya murashaxiinta cusub ee lagu meeleeyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale, Iska hubi haddii aad u baahan tahay fiiso UAE?. Shirkadeena ayaa gacan ka geysatey sidan oo kale. Gaar ahaan Shaqooyinka Dubai waayo dadka reer Indiya ayaa u dhoofaya.
Wakaaladaha shaqaalaynta iyo goobaha shaqada
Xirfadaha Dubai iyo shirkadaha shaqaalaynta
Mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee dalxiisku waa dhab ahaantii Dubai. Shaqaale cusub oo ka socda adduunka oo idil. Tusaale ahaan shaqaalaha ka socda South Africa oo dib ugu soo celinaya shirkadayada shirkada. Inta badan shaqo-dooneyaasha ka diiwaangashan shirkaddeena. Maareynta shaqo raadinta ku sugan Dubai kooxaha shaqaalaysiinta.
Taasi waxay siineysaa shirkadeena dadaallada kobaca mustaqbalka. Shirkadda Dubai City waa tan ugu wanaagsan ee loo adeegsado shaqooyinka suuq-geynta ee Dubai. Si wada jir ah magacyadeenna warbaahinta bulshada ee cajiibka ah ee UAE. Waxaa muhiim ah in la garto in shirkaddeena ay si adag ugu shaqeyneyso sidii ay kuu siin lahayd caawimaad ah a shaqooyinka Dubai iyo Abu Dhabi mana aha mid sahlan in la helo shaqo.
Mid kale oo qodob muhiim ah oo muhiim ah oo shirkadeena guud ahaan u maamula macaamiishooda. Miyay taasi tahay inaan dadka ka caawineyno Samee falanqaynta ugu dambeysa dib u dejinta UAE oo ka timaada Aasiya. Iyo wax kasta oo loo tixgeliyo booqdeyaasha ku sugan caasimadda UAE. Waxaan qaadnaa waajibaadkayaga si aan kuugu meeleynno si dhab ah. Mar dhow iyo hadaba macaamiisheenna ayaa hela a Dubai Shaqooyinka loogu talagalay Hindisaha ama talobixin xirfadeed oo lacag la'aan ah.
Maxaa shaqo ah? Macluumaadka iyo xirfadaha aad u baahan tahay?
Xaalad waliba, haddii aad raadineyso bogag shaqo ee Dubai. Waxaad u baahan tahay xirfado gaar ah si aad u bilowdo shaqo. Tusaale ahaan, si aad u hesho xirfad mihnadeed ee UAE, waxaad u baahan tahay inaad heshid warbixinno guuleysi ah oo lagu saleeyo. Iyadoo shirkaddayada, waxaad ka heli kartaa sida ugu fiican ee loo isticmaalo shaqooyinka raadinaya caawimo. Adigoo isticmaalaya annaga blog ku yaal Dubai. Si aad u dhigto qaab kale, shirkaddayada ayaa sidoo kale bixisa wax badan Macluumaadka loogu talagalay dadka u shaqeynaya xaafadda.
Inta aad adiga raadinaya shaqooyinka shirkadaha Dubai Dubai. Dhaqaatiirta kale waxay isku dayi doonaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan loo-shaqeeyaha sida ugu dhakhsaha badan markay helaan mid. Xirfadda Dubai waa waxa booqdayaasha badankood ay rabaan. Waa in la xasuusto inaadan ahayn qofka keliya. Dadka booqanaya UAE yeelashada asalka waxbarasho adag. Tusaale ahaan, waayo-aragnimada maamulayaasha MBA. Ama xitaa barashada PhD-da oo wali waxay u dagaallami doontaa inay kula shaqeyso.
Guud ahaan caawimaad shaqo oo loogu talagalay qof kasta oo ka soo jeeda UAE. Had iyo jeer waa la qadariyo. Sababta oo ah haddii aadan lahayn waayo-aragnimo kugu filan waxaad yeelan kartaa oo keliya a Waxaan rajeyneynaa in haddii lagu awoodi karo in lagu meeleeyo UAE. Mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee aad ku isticmaali karto Emirates waa xirfad barasho ee Dubai. Waxaad ka caawin kartaa dadka kale inay bartaan aqoonta qaar oo ay lacag sameeyaan.
Sida loo hel a dibada uga shaqeysaa Dubai?
Sidee loo maamulaa Dubai Jobs for Indians?
Falanqaynta ugu dambaysa ee boggayaga shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay qurba-joogta Hindiya. Ku qor xiisaha maqaalka ku saabsan shaqeynta dibedda Dubai. Halka ay khibradeenu tahay caawimo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee caalamiga ah. Markay wax walba tixgeliyeen oo dhammaantood meel ku leeyihiin. Kooxdayada shaqaalaynta, runti, waxay kaa caawinayaan inaad noqoto shaqaale Emirates. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku dadaalnay inaan soo koobno ​​dhammaan macluumaadka. Waxaa intaa dheer, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino sidii aad u heli lahayd shaqooyinka Dubai ee Hindida.
Tusaale ahaan, gaaban, qaado aragti gaaban. Iskuday naftaada oo isku day inaad muujiso khibradaada suuqa shaqada ee Dubai. Waxaad siin doontaa dhibcahan inta lagu jiro cilmi-baarista loo-shaqeeyaha. Sidaas, Crypto Lacagta Lacagta ee Dubai City wakhtiga 2018-2019 adigaa iska leh. Haddii aad direysid resume maanta.
Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay Hindida waxaa sidoo kale qaadi kara haweeney expats ah. Shirkadaha cusub ee Bariga Dhexe shaqaalaysiinta haweenku waxay lumisaa dumarka. Laga soo bilaabo macaamiisha adeegga ilaa maamulka hawlgalka warshadaha hoteelka. Qurbo-joog ka yimid agagaarka aduunka oo u guuray UAE. Tirada sii kordheysa ee shaqaalaha cusub ee Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay dadka qurbaha ku nool ayaa iyaduna haweeneyda ah. Shirkadaha Dubai helitaanka iyo shaqaalaysiinta haweeneyda.
Resume Resume Dubai Shaqooyinka loogu talogalay dadka Hindiya
Shirkadeena oo maamusha Dubai Shaqooyinka loogu talagalay qurba-joogta Soomaalida. Ilaa waqtigan xaadirka ah ayaan heysanaa meelo ka badan kuwa 120,000 ee shaqo doonka ee ku sugan UAE. Waxaana jira shirkado badan oo u qalma shaqada. Tusaale ahaan Adeegyada Tata Talo-bixinta ee UAE. Shaqooyinka maxalliga ahi waxay ku bixiyaan xarun wax iibsi ah. Intaa waxaa dheer, makhaayado iyo maqaayado.
Gabagabaynta xirfad shaqo ee UAE
Tan iyo markii aan u guurey si ku dhow dhammaadka maqaalkayaga. Shaqooyinka Dubai ee dadka Hindida ah iyo ajnabiguba waa niyadjabkayaga. Su'aalaha kelida ahi waa ma jeclaan lahayd inaad shaqo ku biloowdo Emirates?. Haddii Jawaabtu haa tahay oo aad rabto inaad ku shaqeyso riyo ku saabsan mustaqbalka. Iyo gaar ahaan shaqooyinka Dubai ee dadka Hindida ah. Shirkadda Dubai City waa adeeggaaga.
Maamulayaasha cusub ee kireystayaasha iyo shirkadaha ayaa sidoo kale la soo dhaweeyay. Haddii aad shirkad leedahay haddii aad shaqo ku leedahay Dubai. Waxaanu u direynaa shaqooyinkaaga shaqaaleyaal shaqaalaheena. Anigana waxaanu kugula talineynaa xitaa lacag la'aan shaqaale Sri Lanka ah. Xaaladahan oo kale, boosaska la xiriir wakiiladeena shirkada wixii faahfaahin dheeraad ah. Shaqooyinka Dubai ee loogu talo galay qurbaha Hindi waa kuu furan!.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa tilmaamo wanaagsan ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hada waad heli kartaa hagitaan, talooyin iyo shaqo ka helis Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.
Xiriirimaha Gudaha - Bogaggayada Ugu Fiican!
100% shaqo hubsiimo ku jirta (2)
Shaqooyinka kooxaha on WhatsApp (1)
Shaqooyinka dubai loogu talagalay ajaanibta 2020 (1)
Maxaa si fudud looga heli karaa (1)
Shaqooyin cusub oo waxbarida ah oo ku yaal dubai (1)
Copyright © 2020 Shirkadda Dubai City. All rights reserved
CV bilaash ah!
Dib U Soo Kordhi!
Bilaash! - Fursadaada u hel ku guuleysto Shaqo Dubai!
Resume Resume - Shaqo Cusub!
Iska diiwaan geli CV-ga Imaaraadka!